Information on incontinence in Somali | Continence Foundation of Australia
Macluumaadka hayn la’aanta kaadida Soomaali
Celin la'aanta saxaradu waxa weeye iyada oo ay kaa da'aan, si aan ku talagal ahayn, kaadida iyo xaarku. Hayn la’aanta saxaradu waxay saamaysaa dhamaan dadka dhaqankay doonaan ha ahaadeene, laakiin caadi maaha. Akhbaarta wanaagsanise waxa weeye hayn la’aanta saxarada waa la daaweyn karaa. Boggaan waxaad ka helli kartaa macluumaad lagu tarjumay afka Soomaaliga oo kaa caawimaya inaad barato dabeecada kaadi haysta iyo malawadka. Xaashiyaha xaqiiqada ayaa lagu tarjumay afkaaga. Haddii aad jeclaan lahayd inaad dhegaysato macluumaadka, riix bottonka maqalka.
"Celin la’aanta saxaradu waxay noqon kartaa dhibaato yaxyaxle ah, sidaas oo ay tahayna 4tii qofba 1qof ayaa dhibtaas la kulma Australia. Kelidaa ma tihid. Caawimo ayaa la heli karaa. La hadal dhakhtarkaaga ama wac Khadka Caawimada Celinta Saxarada ee Qaranka tel: 1800 33 00 66."
Khadka Caawinta Cesashada Qaranka: 1800 33 00 66
Haddii aad dhibaato ku qabto afka Ingiriiska la xiriir Khadka Caawimada iyaga oo isticmaalaya adeega ku tarjumida telefoonka oo ah 131 450. Sii nambarkayaga oo ah 1800 33 00 66.
Wac hadda 131 450.
Khariidada musqusha dadweynaha